Zvakatipoteredza Ryokai LED Pasi pemvura Chiedza Basa uye Kudzora
Chigadzirwa Chigadzirwa: Sumo kune basa uye kugadzira kweyakavhenekerwa mwenje Yakatungamira pasi pemvura mwenje technical technical munda: Rudzi rwe LED pasi pemvura mwenje, inotsigira yakajairwa USITT DMX512 / 1990, 16-bit grey sikero, grey nhanho inosvika 65536, ichiita iyo yakajeka ruvara yakanyanya kusimba uye yakapfava. B ...
Mwenje wepasi pe LED Inoshanda chigadzirwa chigadzirwa chemarambi
LED mumagetsi epasi / akadzivirirwa ave kushandiswa zvakanyanya mukushongedzwa kwemapaki, tsangadzi, makwere, matare, mibhedha yemaruva, nemigwagwa yevanofamba netsoka. Nekudaro, mune ekutanga anoshanda mafomu, matambudziko akasiyana siyana akaitika mumwenje ye LED yakavigwa. Dambudziko hombe idambudziko risina mvura. Akatungamirira grou ...
Maitiro ekusarudza chaiyo LED mwenje sosi
Nzira yekusarudza chaiyo LED mwenje sosi yevhu muvhu? Nekuwedzera kwekuda kwesimba rekuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza, isu tiri kuwedzera kushandisa mwenje dze LED mune muvhu mwenje dhizaini Musika we LED parizvino musanganiswa wehove uye dhiragoni, yakanaka uye ba ...
Sechikamu chakakosha chenzvimbo
Sechikamu chakakosha chenzvimbo, kunze kwemwenje kuvhenekera hakungoratidzi chete pfungwa yemamiriro epasi Iyo nzira zvakare chikamu chikuru cheiyo nzvimbo chimiro chevanhu vekunze zviitiko zvehusiku. Sayenzi, yakaenzana, uye mushandisi-inoshamwaridzika kwekunze nzvimbo lighti ...